मकवानपुरमा आज ७६ जनामा कोरोना,कुन स्थानीय तहमा कति ? - Khabar Break
मकवानपुरमा आज ७६ जनामा कोरोना,कुन स्थानीय तहमा कति ?
हेटौंडा । मकवानपुरमा आज थप ७६ जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ ।
आज ९३ जनाको पिसिआर परीक्षणमा ५७ जना र एन्टीजेन विधिबाट ४२ जनामा गरिएको परीक्ष्णमा १९ जनामा गरी थप ८४ जनामा कोरोना पुष्टि भएको जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यलय मकवानपुरले जनाएको छ । ९३ जनाको पिसिआर परीक्षणमा हेटौंडा उपहानगरपालिका ४८ जना,मकवानपुरगढीका ४ जना र थाहा नगरपालिका,भीमफेदी एक एक जना रहेका छन् । यसैगरि हेटौंडा बस्ने जिल्ला बाहिरका ३ जना रहेका छन् ।